बिहान ढिलासम्म सुत्नेहरुलाई लाग्छ यस्ता भयानक रोग – rastriyakhabar.com
बिहान ढिलासम्म सुत्नेहरुलाई लाग्छ यस्ता भयानक रोग
सुतिराख्न कसलाई मन पर्दैन र ? सुत्दा दिमाग तिखो हुन्छ भने शरिरमा दिनभरी काम गर्नका लागि ऊर्जावान् राख्छ ।
यतिमात्र होइन, पर्याप्त निन्द्राले मोटोपना, मधुमेह, हृदय रोग र समयपूर्व मृत्युको सम्भावना निकै कम हुन्छ ।
हामी सबैलाई थाहा छ कि कम सुत्दा शरिर र दिमागमा नकारात्मक असर पर्ने गर्दछ तर धेरै सुत्दा शरिरमा पुग्ने नकारात्मक असरबारे जानकार हुनुहुन्छ तपाईं ?
बुधबार, चैत्र २८, २०७४ मा प्रकाशित